चाडपर्वमा के खाने ? कसरी खाने ? « Drishti News – Nepalese News Portal
चाडपर्वमा के खाने ? कसरी खाने ?
२५ आश्विन २०७८, सोमबार 1:52 pm
कोरोना महामारीले गत सालका चाडपर्व सुनसान थिए । नजिकका आफन्तबाहेक अन्य ठाउँमा गएर दशैं मनाउन कसैले पाएनन् । यो साल पनि अवस्था उस्तै छ । कोरोनाको अवस्था उस्तै छ । त्यसैले यस वर्ष पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर दशैं मनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका प्रमुख चाडहरुमध्ये विजयादशमी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महत्वपूर्ण चाड हो । दशैंमा देवी देवताका मन्दिर जाने, शक्तिपीठहरुमा दर्शन गर्ने, पूजा–आराधना गर्ने गरिन्छ । दशैंमा ठूलाबडाको हातबाट टिका, जमरा र आर्शीवाद ग्रहण गर्ने परम्परागत चलन छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना सहज हुँदैन । त्यसैले अधिक सतर्कता अपनाउनुको विकल्प हुँदैन ।
दशैंमा केटाकेटीहरु पिङ खेल्ने, साथीसंगीसँग रमाइलो गर्ने परमपरा छ । घरपरिवारका सदस्यहरु एकठाउँमा भेला भएर रमाइलो गर्ने, मिठो खाने, राम्रो लगाउने चलन छ ।
दशैंमा अन्य समयको तुलनामा धेरै नै मासुजन्य परिकारहरु बनाएर खाने गरिन्छ । अधिक मात्रामा मासुजन्य खानेकुराले शरीरलाई हानी पुर्याउँछ भन्नेमा हामी सचेत छैनौँ । अधिक मात्रामा चिल्लो, गुलियो, नून, खुर्सानी र मसला प्रयोग भएका खानेकुराले धेरैको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ ।
कस्तो खानेकुरा हानिकारक हुन्छन ?
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बढी चिल्लो, बोसोयुक्त, गुलियो र नुन भएका खाना तथा बट्टामा प्याक गरिएका अचार, फ्रिजमा राखिएका ‘जङ फुड्हरु’ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हानिकारक हुन्छन् ।
दूध, घ्यू, दूधबाट बनेका परिकारहरु, बोसो, नरिवलको तेल, तारिएको खाना, वर्गर, खसी, बोकाका आलो मासुहरु, कुखुराको छाला, अण्डाको पहेँलो भाग र बोसोयुक्त बंगुरको मासु, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने खाद्यन्न हुन् । यस्ता खाना तथा पेय पदार्थमा हुने चिल्लो पदार्थको मात्राले रगतको कोलस्टोर बढाएर मुटु र रक्तनली खराब भइ रक्त नलीमा बोसो जम्ने हुन्छ । पसलमा पाइने फ्रोजन फुड र फास्ट फुडहरुले पनि शरीरलाई हानी पुर्याउँछ ।
पछिल्लो समय चाडपर्वहरुमा अत्याधिक मात्रामा मदिरा प्रयोग हुन थालेको छ । मुटु रोगी, उच्च रक्तचापका विरामी र सुगर पेसरमा बिरामीहरुका लागि मदिरा अत्याधिक हानिकारक हुन्छ । त्यसैले चाडपर्व वा अन्य समयमा पनि विरामी स्वयम् र परिवारका सदस्यले समेत खानपानमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्वस्थ मानिसले पनि कस्तो व्यक्तिले कुन र कति मात्रामा मदिरा वा अन्य खाद्यवस्तु सेवन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझेरमात्र सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
दशैंका खानपानले स्वस्थ मानिसलाई पनि बिरामी बनाउन सक्छ । खानाको मात्रा नमिल्दा स्वस्थ मानिसलाई मुटु कमजोर हुने, मुटुको चालमा अनियमितता हुने, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्काघात जस्ता समस्याहरु हुन सक्छ । त्यसैले खानपानमा विषेश ध्यान दिनु नै उत्तम हुन्छ ।
बढी मदिरा सेवन गरे के हुन्छ ?
मदिरा सेवन गर्नु आफैँमा घातक कुरा हो । यसले कदापि, स्वाथ्यलाई राम्रो गर्दैन । मदिरा बढी सेवन गर्ने व्यक्तिको कलेजोमा बोसो जम्मा भइ कलेजो सुनिने, जन्डिस हुने जस्ता समस्या हुन्छ । मदिराको मात्रा बढ्दै गयो भने हृदयघात, मस्तिष्काघात, जण्डिस र आमाशयमा समस्या आएर अल्सर, क्यानसर भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले दशैं हो भन्दैमा अधिक मात्रामा मदिरा सेवान गर्नु घातक छ ।
२४ घण्टाभन्दा बढी फ्रिजमा राखेको खानेकुरा नखाने
पछिल्लो समय धेरै खाद्यपदार्थ किन्ने र फ्रिजमा राखेर खाने चलन छ । विषेश गरी चाडपर्वका बेला बढी फ्रिजका खानेकुरा खाएर ‘फुट पोइजन’ भइ मृत्युसमेत भएका घटना छन् । फ्रिजमा राखेर झिक्दै तताउँदै फेरी राख्दै गर्दा ‘फुट पाइजन’ हुने खतरा भएकाले एकपटक मात्र फ्रिजमा राखेको खानेकुरा तताएर खानु उपयुक्त हुन्छ । २४ घण्टा भन्दा बढी फ्रिजमा राखेको खानेकुरा नखानु राम्रो हो । ‘आ दशैं त हो नि मज्जाले खाउँ’ भनेर बढी खाएर स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने काम गर्नुभन्दा थोरै तर ताजा खानेकुरा खानु राम्रो हुन्छ ।
स्वास्थ्य रहन कस्तो खाने ?
हरेक खानामा प्रोटिनको मात्रा ३० प्रतिशत, कावोर्हाइडेटको मात्रा ४० प्रतिशत र चिल्लो पदार्थको मात्रा ३० प्रतिशतभन्दा कम हुनु राम्रो हो । दशैंको बेला यी तीनै कुराको मात्रा बढी भएको खाद्यपदार्थ खाने गर्दछौँ । सकेसम्म दुई दिनमा एकपटक मात्र मासु खाने, कम चिल्लो तथा मरमसला कम भएको खाना खाने, हरियो सागपात, रेसायुक्त पदार्थ, फलफूल, भिटामिन र बोसोरहित पदार्थहरु सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ ।
चिल्लो, नून र गुलियो बढी नभएको मदिरामुक्त खानेकुरा नै स्वास्थवद्र्धक हुन्छ । मकै–भटमास, सूर्यमुखी फूलको तेल, बदामको तेल आदीले शरीरको ‘नराम्रो कोल्ड स्टोर्स’ घटाइ ‘राम्रो कोल्ड स्टोर्स’ बढाउने काम गर्छ ।
मासुमा रहेको बोसो हटाउने, कुखुराको मासु छाला फालेर खाने, माछा, मासु स्टिम फ्राई, रोष्टिङ, ग्रिलिङ वा उसिनेर वा माइक्रो वेबमा राखी पकाएर खानु राम्रो हुन्छ । पोलेको मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
हरियो सागपात, सलाद, फाइवरयुक्त पदार्थहरु सँगै खाएमा फाइवरले आन्द्रामा चिल्लो पदार्थको शोषण कम गराउनका साथै रगतमा कोलस्टोरको मात्रा बढ्न दिँदैन् ।
शरीर सबैभन्दा ठूलो हो
दशैंको बेला किनमेल गर्ने, धेरै मात्रामा खानेकुरा खाने र रमाईलो गर्ने चलन छ । तर, रमाईलो गर्ने वहानामा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न नै बिर्सन्छौँ । ‘मेरो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ’ भनेर चिन्ता लिइ कहिले पनि अस्पताल जाँदैनौँ । चाडपर्वहरु मनाउनुपर्छ, रमाईलो गर्नुपर्छ । सँगै, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सचेत हुनुपर्छ । स्वास्थ्य नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पति हो, धर्म हो, सबै कुरा हो । त्यसैले सचेत भइ खानपानमा ध्यान दिनएर दशैं मनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
(वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीसँग दृष्टिन्यूजका ज्ञानु घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)